के एमाले सग्लो रहला ? - नेपालबहस
के एमाले सग्लो रहला ?
२ चैत, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा व्यूँतिएको एमालेभित्र चर्किएको विवाद हल गर्न आज दुबै पक्षका शीर्ष नेताहरु भेला त भए , तर ठोस परिणाम भने दिन सकेन । चुरो कुरो फागुन २८ को निर्णयमै गएर रोकियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरी माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुको जिम्मेवारी मात्र खोसेनन्, बरु माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ भाईलाई केन्द्रीय कमिटीमै मनोनित गरिदिए । उक्त बैठकको निश्कर्षलाई उनले नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेर प्रचार गराए ।
त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाल पक्षले पनि समानान्तर कमिटी बनाउने काम ग¥यो । साथै, यही चैतको ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलासमेत आह्वान गरेको छ । नेपालको यो कदमले ओलीलाई केही फरक त पर्ला नै । तर सधैंको कचकच भन्दा एकैपटकको प्रहार ठीक भन्ने मान्यता ओलीले बोकेको देखियो ।
लोकलाज र कतिपय निकटवर्ती सहयोगी नेताहरुको आग्रहमा ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई आज धुम्बाराहीमा भेट गरेपनि आफ्नो पूर्ववत अडानबाट टसमस भएनन् । आजको छलफलमा नेपाल पक्षले प्रष्टै भन्यो–सहमति र सहकार्य गर्ने भए पहिलो सर्त फागुन २८ को निर्णय खारेज गरौं । तर ओली पक्षले भने उक्त निर्णय खारेज गर्न नसकिने प्रष्ट धारणा राख्यो ।
छलफलपछि पार्टी कार्यालयबाट बाहिरिएका नेता नेपालले पनि ओली पक्षको अडान कायमै रहेकाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला कायमै रहने बताए । आज त ओलीसँग सामान्य कुरा भए तर आफ्नो अडान त्याग्ने मूड देखिएन भन्दै उनले पार्टी जोगाउने की भत्काउने भन्ने निर्णय स्वयं ओलीको आगामी निर्णयमा भर पर्ने बताए ।
उता, ओली पक्ष भने अब फागुन २८ को निर्णय खारेज हुन नसक्ने प्रष्ट जवाफ दिइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फागुन २८ लाई नेपाल पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने तर्क गरेका छन् । यसको अर्थ नेपाल पक्षले ओलीका सबै निर्णय स्वीकारेर एमालेमा सकृय हुनुपर्ने छ ।
तर नेपाल पक्षको बुझाई अब ओली नै एमाले सग्लो नरहोस् भन्नेमा प्रष्ट रहेको छ । अर्काको अस्तित्व र स्वाभिमान गुमाएर आफ्नो भारदारी गर्नु पर्छ भन्ने ओलीको चिन्तन मान्य नहुने नेता भीम रावलले बताए । नेकपा एमाले भन्ने पार्टी हामीले दुख गरेर स्थापित गरेका हौं, त्यहाँ ओली वा ल्याइतेको रजगज गर्ने गरी हामी थपडी बजाउन जाने होइन भन्दै नेता रावलले ओलीको आगामी कदम हेरेर आफूहरु अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
पर्सिको भेला हुन्छ, देशभरिका साथीहरुको भावना बुझेर मात्रै हामी अगाडि बढ्छौं उनले भने । दुबै पक्षका नेताहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आजको वार्ता केवल सम्बादहिनता टुटाउन मात्र भएको बुझ्नु पर्ने हुन्छ । विवादको जड नै नमेटिने अवस्थामा नेकपा एमाले सग्लो र एकीकृत हुने भन्ने प्रश्नै रहेन ।
दिनदिनै महामारी फैलिदैछ तर सावधानी छैन, जोखिम उच्च ! ३ मिनेट पहिले
गृहमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति पाएका बादलले लिए शपथ १२ मिनेट पहिले
संक्रमण बढेसँगै यतीकाे स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई १६ मिनेट पहिले
नेप्से आज दोहोरो अङ्कले ओरालो २१ मिनेट पहिले
त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज : नेदरल्याण्डस्द्वारा मलेशिया पराजित २६ मिनेट पहिले
विपक्षीहरु नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा, सरकार भने अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा २ हप्ता पहिले
चेपाङको आयआर्जन वृद्धिका लागि उन्नत जातका बोयर बोका वितरण ४ हप्ता पहिले
बरुण हाइड्रोपावरले बोनस शेयर पठायो शेयरधनीहरुको डिम्याट खातामा १ हप्ता पहिले
सडक स्तरउन्नति ३ महिना पहिले
विजोर प्रणालीले नागरिकलाई सास्ती १ वर्ष पहिले
वीर अस्पताल निर्माण कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन २ महिना पहिले
भारतीय सैन्य विमान सम्पर्कविहीन २ वर्ष पहिले